छाया कम्प्लेक्स थप विवादमा, पत्रकार सम्मेलनमै तनावको स्थिति (भिडियो र तस्विरसहित) |
कमला भुसाल ७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार सेवा
काठमाडौं । स्थानीयको विरोधका बीच बैंकर्स पृथ्वीबहादुर पाण्डे, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले निर्माण गरेको छायाँ सेन्टर थप विवादमा पर्न थालेको छ । विवादको विषय बाहिर आएपछि त्यसको खण्डन गर्न छाया सेन्टर व्यवस्थापनले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तनाव नै सिर्जना भयो ।
स्थानीयले पत्रकार सम्मेलनमै छाया सेन्टरले स्थानीयको भावनाविपरित ऐतिहासिक सम्पदा मासेर भवन बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि झण्डै झडपको स्थिति सिर्जना भएको हो । ठमेलको एक पीडित यादवलाल कायस्थले कार्यक्रममै छायाँ कम्प्लेक्स भत्काएर पुनः पोखरी निर्माण गनुपर्ने भन्दै स्थानीयमाथि अन्याय गरेर पैसा र शक्तिको बलमा भवन बनाइएको बताए ।
उनले सम्पदा मासेर होटल र सिनेमा हल बनाउँदैमा देश विकास नहुने भन्दै केही व्यक्तिले गलत ढंगले आर्जन गरेको पैसा लगानी गरेर अझै धनी बन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व विनास गरी कम्प्लेक्स ठड्याउने कुरा तर्कसंगत हुननसक्ने बताए ।
कायस्थले कमलपोखरीलाई मासेर व्यवसायीक कम्प्लेक्स बनाउनु अपराध हो भन्दै यस्ता अपराधिलाई समाएर कारवाही गर्नसमेत आग्रह गरे । उनले छाया सेन्टरमा ४५ जना हाइप्रोफाइलहरुको लगानी रहेको पीडित स्थानीयलाई पैसाको प्रलोभनमा फँसाउन खोजिएको आरोप लगाए । कम्प्लेक्सको प्रलोभनमा वडाका केही मान्छेहरु फँसेको कायस्थको तर्क छ ।
उनले भने, ‘कमलपोखरीमा छाया कम्प्लेक्स बनाउने हो भने रानीपोखरीमा माया कम्प्लेक्स निर्माण नहोला भन्न सकिन्न । यो हाम्रो सरोकारको विषय भएकोले विरोध गरिएको हो । हामीले विकासको विरोध गरेको होइन् । सम्पदा मासेर कम्प्लेक्स ठड्याउनु विकास हुँदैहोइन् ।’
यता छाया सेन्टर व्यवस्थापनले भने स्थानीयको विरोध अर्थहित रहेको भन्दै आफूहरुले गलत काम नगरेको जिकिर गरेको छ । छाया सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठले राज्यले निर्दिष्ट गरेको नियमको अधिनमा रहेर आफूहरुले भवन बनाएको बताए ।
पाण्डे दाजुभाईले आफ्नी आमाको नाममा चार अर्बभन्दा बढि लगानीमा निर्माण गरेको यो भवन निर्माण गर्दा उनीहरुले यति ठूलो लगानी कहाँबाट ल्याएको हो ? त्योसमेत छानविन हुनुपर्ने एकथरीको आवाज छ । महेश्वर श्रेष्ठले भने भवनको लगानी वैधानिक रहेको र यो लगानीमा नियोजित आक्रमण गर्न खोजिएको तर्क गरे ।
उनले भने, ‘आजसम्मको दिनमा कुनै पनि नियम, ऐन कानुनलाई मिचेको छैन । हामीले सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर यो सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । देशको लागि नमुना यस्तो नमुना प्रोजेक्ट बनाउन यो जग्गा किनेको ११ वर्ष भयो । यति लामो तयारी, डिजाइन र छिमेकीसँग बसेर कुरा मिलाउँदा नै ४.५ वर्ष लाग्यो । त्यो बेला विवाद किन आएन ? अहिले धारे हात लगाइनु आश्चर्यको विषय बनेको छ।’
आफूहरुले गुठीको जग्गामा कम्प्लेक्स बनाएको र अदालतको फैसला एवं कानुन अनुसार यसको निर्माण सम्पन्न गरेको भन्दै श्रेष्ठले राज्यलाई करोडौं रुपियाँ राजश्वसमेत तिरेकाले विवादको पछि लाग्न नहुने बताए । पोखरीको कारणले विवाद नआएको उनले भनाई थियो ।
‘छाँया सेन्टर’ सञ्चालनमा नआउँदै विवादमा, स्थानीयको विरोधपछि मन्त्री उदघाटनमा आएनन्
राजगुठीलाई व्यक्तिगत बनाई कसरी बनाइयो छाया कम्प्लेक्स ?